Makomborero pamusoro peExx: kuongorora
Kana iwe uchida kubudirira kuisa mari yako, zvino verenga pamusoro pezviwanikwa pa Forex. Ongororo nyora zvakawanda uye kazhinji. Vanhu vanoita basa iri zuva nezuva vari kuwedzera.
Pakati pese, kuisa mari muzvivimbiso, kutamba nemari yakasiyana-siyana inonakidza uye panguva imwechete yebhizimisi rakaoma. Nokuti hausi kungodzidza nzira yekubata nayo mari, asi iwe uchiri kuwana.
Zvechokwadi, mari inowanikwa paIndaneti paExx inoratidzika nyore, nokuti hapana chakareruka: akadurura mari pachipo, akatenga mari pamutengo wakaderera, akagadza kosi kuwedzera kukosha kwayo uye, pashure penguva yakati, yakadzorera mari yakashandiswa uye pamusoro pebatsiro. Zviri nyore here? Zvakanyanya, asi munyaya. Mukuita, izvi zvakaoma zvikuru. Mune zvimwe zviitiko, hazvibviri kutaurira kuti mari iyo kana mari yakawanda ichafamba-kumusoro kana pasi pasi.
Kuti zvimwe zvifananidzire mararamiro ekuchinja, vatambi vane ruzivo (uye vadzidzisi vezvikamu-nguva) vanouya nemapurogiramu akakonzerwa akagadzirirwa kuita kuti zvive nyore kuwana mari pa Forex - mazano. Asi nhamba yavo yezuva ranhasi ndeyekuti hazvigoneki kutaura zvakananga kana ichati "ichisanganise" dhipiti kana kubatsira chaizvo kuita purofiti.
Kana iwe ukanyatsocherechedza kumakamuri akasiyana-siyana ekukurukura, uko iwe unokurukura nezvekuwana mari pa Forex, maonero kune vauri mazano vanosiyana zvakasiyana. Zvichida izvi zvose maererano nekodzero yemunhu, mumafungiro ake kune ruzivo rwetano uye tsika yekutamba pamutengo wekutengesa.
Kana iwe usingakwanisi kubhadharira forex kurovedza forex, kana iwe hauna kuvimba nemano ako, unogona kuenda nenzira mbiri:
- Nzira yekutanga: kupa mazano kune vatsigiri vakasununguka. Dambudziko guru rinogona kuitika - kuvhara mari yose munguva pfupi. Zvisinei, sechinhu chisarudzo, unofanira kunyatsoverenga mazano akabatanidzwa, unzwisise kuti ungashanda sei nemudzidzisi uyu, verenga zvose zvinobvira pamusoro pekuwana pane Forex, mazano pamusoro pevanopa mazano nevamwewo zvakadaro;
- Nzira yechipiri: ita zvaunoda kuvimba nekutarisira, izvo iwe uchabhadhara imwe chikamu chemari yose. Panewo huwandu hwehutano huno pano: chisarudzo chisingafungidzirwe sarudzo yemutungamiri, uyo zvakare munguva pfupi kwazvo achabatanidza mari yako yose kwauri.
Kana ukasarudza kunyatsopindira muExx trading, unofanira iwe:
- Sarudza mutengi anonyatsovimbika, iyo inyore kuongororwa, tsvaga ruzivo rwakanyanya pamusoro pekambani, nezvakadaro; Zvipo paInternet (Forex) - basa rakaoma kwazvo;
- Dharirai panhoroondo yedemo, dzidza nzira yekushandisa mari yako;
- download uye kuisa pamakombiyuta yako mupi wezano musingakwanisi kutamba pane demo reemo; Mutarise, tsvaga zvose zvaanonzi chips uye zvikanganiso zvakakomba;
- Kudzidza, kurovedza uye kudzidzazve, nguva dzose uverenge mabhuku matsva, nenyaya, mazano ekudzidzisa (kune rusununguko), nokuti nheyo uye tsika dzinogara dziri pedyo.
Usakanganwa kuti pane maforamu, mahara maunogona kuverenga pamusoro pemari yawanikwa pa Forex: mazano, mazano, marudzi ese emagadzirirwo, unogona kubvunza mubvunzo waunofarira uye nezvimwe zvakadaro.
Uye yeuka: kune mhirizhonga yakawanda paInternet, kune avo vanoita manzwiro evatengesi vasina ruzivo ndiyo nheyo yemari.
Imwe yezvingasarudzwa zvemukati mune ramangwana reIndonesia 500
Rmb: FRS Yakasarudza Kuva Nenguva Yese
Duku furati munyika. Top Apartments duku 5 zvenyika
Tinosimudza miriyoni kana miriyoni emadhora Chii uremu
The privatization of womutambo; apo kutanga uye sei kupedzisa?
Maekisesaizi uremu - a Herculean nesimba kana nguva kutamba?
Ndezvipi here Laptop simba kupfuura
Information chigadzirwa - chii ichi? Concept uye Services
Grebe (shiri): tsananguro uye mapikicha
Palace of Republic (Almaty): kare, tsananguro, nzvimbo
Zvikuru dzakakurumbira hashtags mu "Instagram" uye kushandiswa kwawo
Resorts mu China uye zvinobatsira avo
Financial Rwako. Logistics utariri wemuTesitamende zvebhizimisi
Chii nani ikavhuna Mapedhi: anobatsira mashoko
Spirea pfumbu. Tichidyara uye kuchengeta miti.
Masere Orthodox vayambuke: photo, ukoshi, zvikuru